”खुशीको खबर, चीनले बनायो कोरोनाविरुद्ध नयाँ खोप, १ हजार १ सय मानिसमा प्रयोग गर्दा भयो सफल – Sandesh Munch
काठमाडौं, असार १५ । चीनबाट उत्पन्न भएका कोरोना भाइरसको अन्त्य कसरी होला ? भन्ने विषयमा विश्व नै चिन्तित बनिरहेका बेला चीनले कोरोना भाइरसविरुद्ध नयाँ खोप विकास गरेको दाबी गरेको छ। चीनबाट नै उत्पत्ती भएको यो भाइरस विरुद्ध चीनले अहोरात्र खटेर खोप र औषधी बनाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका बेला चाइना नेसनल बायोटेक ग्रुप (सीएनबीजी) ले आइतबार दिएको जानकारीअनुसार यो खोप मानिसमा पहिलो परीक्षण भइसकेको र यसको असर पनि सकारात्मक देखिएको बताइएको छ ।
सीएनबीजीले खोप विकास गरेको जानकारी चिनियाँ सामाजिक सन्जाल विच्याटबाट पनि दिइएको र यो दोस्रो खोप भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यसअघि यही कम्पनीले वुहानको युनिटमा कोरोनाविरुद्ध एउटा खोप बनाइसकेको छ।
१ हजार १ सय २० जना स्वस्थ मानिसलाई परीक्षण खोप लगाएर गरिएको परिक्षणमा यसले सफलता पाएको कम्पनीको दाबी छ । जसले ति मानिसहरुमा उच्च मात्रामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएको कम्पनीले दाबी गरेको छ। अहिलेसम्म चीनमा ८ खोपलाई मानवमा परीक्षणका लागि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिएको चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
Prevब्रेकिङ्ग>खुशी संगै दुखान्त खबर कोरोना संकटमा तेस्राे मुलुकबाट ११ हजार श्रमिक फर्किए, ८७ शव ल्याइयो
Nextदुखको गाडीमा केहिपल हामी संगै आज दहि च्युरा खाने दिन, महामारीकै बिच पनि मनाईदैं धान दिवस
दक्षिण कालीमाईले हामी सबैको रक्षा गरुन,भाद्र २० गते शनिबारको राशीफल
पुजाले आफ्नै कमाईले काठमाडौंमा घर ठड्याउँदै,कुन चलचित्र बाट कती कमाइन पुजाले नालिबेली
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83188)